I-iPhone 7 ekucingelwa ukuba iza kukhanya kule vidiyo ngokweenkcukacha | IPhone iindaba
Ukuvuza ku-Apple kuqala ukuthatha umbala omnyama onsundu. Inyani yile yokuba uninzi lwazo zihlala zingalunganga ngokwenziwa kweekhompyuter okanye uhlengahlengiso, kodwa into esingayibonanga ukuza kuthi ga ngoku ziividiyo ezineenkcukacha ezintle zemodeli ye-iPhone engalindelwanga kude kube phakathi ku-Septemba, itsho iinyanga ezimbini. ukususela ngoku. Isityholo se-iPhone 7 siza kuvela kule vidiyo ngokweenkcukacha ezipheleleyo, apho unokubona khona i-engile nganye yesixhobo kwaye apho sinokubona khona i-tweaks eyenziwe yinkampani yeCupertino kwi-iPhone 6 ngokuziphendukela kwayo.
Iya icaca gca ukuba iApple iza kusebenzisa kwakhona uyilo lwe-iPhone 6, hayi kwi-iPhone SE, eyikopi ngqo ye-iPhone 5, kodwa eneenkcukacha ezininzi. U-LInyani yile yokuba i-iPhone 7 esinokubona kuyo yonke indawo evuzayo kunokuba kunjalo yi-iPhone 6 esombulula ukusilela koyilo ukuba i-iPhone 6 ihlupheke, kwaye oko kubonakala ngathi kuya kuba neendaba ezincinci malunga nezixhobo zekhompyutha. Konke oku kungenxa yokuba kwi-2017, i-iPhone ibhiyozela iminyaka elishumi, kwaye ngokutsho kwabahlalutyi ngumhla i-Apple ethathe isigqibo sokumakisha ukutshintsha umhlaba weefowuni eziphathwayo kwakhona.
Ividiyo iyatyhila, enyanisweni, zonke iindaba ebesizishukuma ukuza kuthi ga ngoku zidibene naloo ndawo. Nangona kunjalo, Kuyinyani ukuba e-China kukho iikopi ezininzi kuzo zonke iintlobo zezixhobo, ke ngekhe kusimangalise konke konke ukuba ibinye, ngenjongo yokufumana udumo. Isixhobo ngokuqinisekileyo sikhangeleka siyinyani kwaye senziwe kakuhle, kodwa sikufumanisa kunzima ukukholelwa ukuba ukuvuza kuyafikelela ukuza kuthi ga ngoku ekwabelaneni ngevidiyo kwiYouTube yemodeli ekufuneka ikhuselwe ngokungqongqo.
Yonke into enamahemuhemu ukuza kuthi ga ngoku malunga ne-iPhone 7
Ukubala ixesha sele kuqalile, asilindelanga ukufumana nayiphi na into entsha enikwa ngu-Apple kude kube yingcaciso ephambili kaSeptemba, apho ekugqibeleni sinokubona uyilo lokwenyani lwe-iPhone 7. Nangona kunjalo, umva ngo-2014 kanye kwenzeka kanye, ngoJuni Sele ndizibonile phantse iikopi ezichanekileyo zokuba i-iPhone 6 ekugqibeleni ibe yintoni, ngenxa yoko asibanjiswanga kwaphela ngumboniso. KUNYEKulusizi ukuba ebusweni bokuvuza, kuncinci kwaye kushiyeke ukuphela. IiWebhusayithi zihlala zithetha ngezi zinto zintsha, eyokuqala yazo uyilo, asizukubona nayiphi na into entsha, okanye utshintsho lwezinto, enyanisweni sinokuthi iya kuba zii-iPhone 6s apho imigca yolonwabo yokugubungela ikhanyisiwe, ngoku ungangeni kwisixhobo, kodwa umda.
Kwelinye icala, i I-3,5mm jack Kubonakala ngathi kugxothiwe, ngoku i-iPhone 7 iya kuba nezithethi ezibini zestiriyo emazantsi ayo, iya konyusa amandla kunye nomgangatho wesandi. Izibuko leMbane, engayi kutshintshwa yi-USB-C, iya kusebenzisa isinyithi esikhazimlisiweyo ngombala wesixhobo, mnyama okanye ngokukhanya ngokuxhomekeke kuluhlu olukhethiweyo.
Enye into ebalulekileyo yile ikhamera, ubuncinci kwimodeli esisiseko, akubonakali ngathi kuya kusetyenziswa ikhamera ephindwe kabini, kodwa endaweni yoko kukonyuka okubonakalayo kubungakanani belensi kunye nelahleko yomsesane wokhuselo, oba sisolongezo esimile tyaba somva isixhobo ngokwaso. Oku kuyenza ingabonakali, kodwa iyacaphukisa. Kolu luhlu asiboni isilayidi ukwenza imo yokuthula, njengoko sibonile kokunye ukuvuza. Nangona kunjalo, le iya kuba ngumzekelo kuthi sonke sinethemba lokuba i-Apple izakuphela ibonisa phakathi ku-Septemba, ukuzisola kwethu, kuba besilindele into entsha ngokubhekisele kuyilo, ngakumbi kuba i-iPhone 6 ayizukungena kwimbali kuba yeyona iPhone intle kakhulu okanye eyona inqabileyo. Ngokubhekisele ngaphambili, ngaphezulu okufanayo, akukho lutshintsho konke konke kunye nezakhelo zangaphambili ezigqithileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » Isityholo se-iPhone 7 siza kuvela kule vidiyo ngokweenkcukacha ezipheleleyo
Yiyo le, kutheni sifuna intetho ephambili ???
Intambo yeTangram Smart, intambo efanelekileyo efumaneka kwiVenkile yeApple